Rita, Writing for My Sake!: My Childhood Days !
Posted by Rita at 1/02/2010 10:37:00 PM
ဟီးဟီး ..."အဲဒီ ဟင်းထဲကို ကြက်သွန်တွေ ထည့်ရတယ်လို့ ဘယ်သူက ပြောတာတုန်း" မေးတတ်ပလေ ... ယုန်ကလေး နှာစေးနေတာလည်း တွေးတတ်ပါ့ ..
ကျွန်တော့်အမ ငယ်ငယ်က ဇီးထုပ်ကို ဘယ်သူတီထွင်တာတုန်းတဲ့ မေးဖူးတယ် .. ပြန်သတိရသွားတယ်ဗျာ
ကလေးဘ၀အကြောင်းလေးတွေ ဖတ်ဖြစ်ရင် တမျိုး ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်။ အစ်မလိုပဲ ကျွန်တော်လည်း အဖေနဲ့အမေ ဘယ်သူ့ကို ပိုချစ်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးကို မကြိုက်ဘူး..။ ငယ်ငယ်ကတည်းက သွေးခွဲတဲ့မေးခွန်းလို့ ထင်လို့.
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလည်း ပုံပြင် အရမ်းကြိုက်တယ်။
According to human society in the vicinity and environment, the boys and girls became growth.
Some are become doctors.
Some are become engineers.
ဟုတ်တယ်မမရီတာ... အဲလို ဘယ်သူ့ကိုပိုချစ်လဲ မေးတာမျိုးကို ငယ်ငယ်ထဲက မကြိုက်ဘူး.. အထူးသဖြင့် လူစုံချိန်မှာ မေးတာမျိုးကို လုံးဝ မကြိုက်ဘူး...။ ငယ်ငယ်က ငါသာဘယ်သူ့ကို ပိုချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင် ကျန်တဲ့ ၁ယောက်ကတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပဲလို့ တွေးနေမိတာနဲ့ ရီပဲရီနေတာ မှတ်မိတယ်...။
ဂွတီးဂွကျ စွာတီးစွာကျယ် ရီတာငယ်လေးပေါ့
ကြက်သွန် မကြိုက်တာကတော့ သားနဲ့အတူတူပဲ သူကိုယ်ဝန်ရကတည်းက ကြက်သွန်ကို အနံ့ခံလို့မရတာ သူတနှစ်ကျော်တဲ့အထိ ကြက်သွန်ပါတာ ဘာမှ စားလို့မရဘူး။ အခုသားကြီးလာတော့ ကြက်သွန်ဖတ်တွေ အကြော်တွေ ဟင်းတွေထဲမှာ ပါရင် အမြဲဖယ်ပေးရတယ်။ မုန့်ဟင်းခါးကို သားကသိပ်ကြိုက်ပေမဲ့ မုန့်ဟင်းခါးထဲက ကြက်သွန်ဖတ်ကို အမြဲဖယ်ပေးရတယ်။ ငယ်ဘ၀လေးအကြောင်းကို ပြန်ပြောရင် အသက်ပြန်ငယ်သွားသလို ခံစားရလိမ့်မယ် ထင်တယ်။